Amadolobha edijithali - singabusebenzisa kanjani ubuchwepheshe njengokunikezwa ngabakwaSIEMENS - iGeofumadas
Mashi, 2020 Ubunginiyela, Innovations
Ingxoxo yeGeofumadas eSingapore no-Eric Chong, uMongameli kanye no-CEO, u-Motorola Ltd.
I-Nokia yenza kanjani ukuthi kube lula emhlabeni ukuthi ibe namadolobha anobuchule? Imiphi iminikelo yakho eyinhloko evumela lokhu?
Amadolobha abhekana nezinselelo ngenxa yezinguquko ezilethwe yi-megatrends yedolobha, ukuguquka kwesimo sezulu, ukusatshalaliswa komnotho emhlabeni kanye nokubuswa kwabantu emhlabeni jikelele. Kubo bonke ubunzima babo, bakha imininingwane eminingi i-mega-mwenization yedijithali engayisebenzisa ukuthola imininingwane nokwandisa izinhlelo ezisekela ingqalasizinda yasemadolobheni.
Kwa-Nokia, sithole i-MindSphere, uhlelo lwethu lokusebenza olusebenzayo lwe-IoT oluvulekile lwamafu, ukunika amandla lo 'muzi onobuhle'. I-Mindsphere ilinganiswe yesikhulumi se- "Best in Class" se-IoT yi-PAC. Ngamandla wayo we-Open Platform-as-a-Service, kusiza ochwepheshe ukudala ikhambi ledolobha elihlakaniphile. Ngamandla ayo we-MindConnect, inika amandla ukuxhumana okuphephile kwemikhiqizo ye-Nokia neyangaphandle-kanye nemishini yokuthwebula idatha yesikhathi sangempela yokuhlaziywa kwedatha enkulu eyenza izinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene zeSmart Cities. Imininingwane eqoqwe edolobheni lonke nayo ingaba yimibono kwabahleli bamadolobha nabenzi benqubomgomo ukubeka phambili intuthuko yakusasa yedolobha elihlakaniphile. Ngokuthuthuka okuqhubekayo kobuchwepheshe bokufakelwa kanye nokuhlaziywa kwedatha, inqubo yokuguqula idatha iye ekuqondeni futhi ikhiqize imibono emisha yezicelo eziwusizo zamadolobha angasiza ukulungisa izinselelo zasemadolobheni ezibangelwa ama-megatrends futhi anwebe ngokwengeziwe amandla obuchwepheshe azothuthukiswa. smart muzi.
Ingabe amadolobha aya ngokuya ehla ngesivinini esifunekayo? Ubona kanjani intuthuko? Izinkampani ezifana ne-Nokia zingasiza kanjani ukusheshisa ijubane?
Umhlaba uya ngokuya wazi ngentuthuko yamadolobha ahlakaniphile. Ababambe iqhaza njengohulumeni, abahlinzeki bengqalasizinda, abaholi bezimboni, bazimisele ukwenza ushintsho. EHong Kong, uhulumeni wethule i-Smart City Blueprint enhle ngo-2017, eyabeka umbono wokuthuthukiswa kweSmart City yethu neBlueprint 2.0 isendleleni. Ngaphezu kokubeka imihlahlandlela ecacile embonini, uhulumeni ubuye ahlinzeke ngezinkuthazo zezimali ezinjengokuxhaswa ngezimali kanye nokuncishiswa kwentela ukuxhasa ukuthuthukiswa kanye nokufakwa kwezinto ezintsha kulesi sihloko esikhula ngokushesha. Okubaluleke kakhulu, iyahola ngezinyathelo ezinhle zedolobha ezifana neEnergizing Kowloon East, lapho kwenziwa khona ubufakazi bokuthi kukhona imiqondo. Sijabule kakhulu ukufaka isipiliyoni sethu kuma-PoCs anjengalawa:
I-Kerbside Ukulayisha / Ukulanda Uhlelo Lokuqapha - Ukuqamba kabusha ukuze wandise isikhala esibalulekile se-gutter-side futhi usize abasebenzisi ukufinyelela i-bay etholakalayo yokulanda / ukulanda nge-AI.
I-Energy Performance Data System - Ukufaka izinzwa ze-smart homegesi ezisebenzisekayo zedatha yangempela yokusetshenziswa kukagesi ukuze abasebenzisi bakwazi ukulandela amaphethini wokusebenzisa ngezinhlelo zokusebenza zeselula ukuthuthukisa izindlela zokusebenzisa ugesi.
Ngaphezu kokuletha ubuchwepheshe bethu emhlabeni jikelele, sikholwa ukuthi singasiza futhi ekwakheni uhlelo lokuchuma lwamasiko emvelo olwenzekayo. Ngale njongo, sitshalile imali kwi-Smart City Digital Hub e-Science Park ukuhlinzeka ngethimba lokuqalisa, ochwepheshe bobuchwepheshe, kanye nabahlinzeki bengqalasizinda ukwakha iphothifoliyo yabo yedijithali nokuthuthukisa izinhlelo zokusebenza ezihle zedolobha.
Imizamo yethu eHong Kong ifanela imizamo yethu kwenye indawo ukusiza amadolobha ukuba acoceke. Isibonelo, eGreat Britain, sisebenzisana neLondon ekwakhiweni kwe-'Arc of Opportunity '. Kuyisibonelo se-Smart City esiqhutshwa ngumkhakha ozimele esifundeni kanye nokusebenzisana neGreater London Authority, lapho kwenziwa khona uchungechunge lwezinhlelo zedolobha elihamba phambili kugxilwe emandleni, ezokuthutha nasezakhiweni.
EVienna, e-Austria, sisebenzisana nedolobha lase-Aspern ekuhlelweni kokuhlola okwenziwe nge-Smart Cities Demonstration Laborator kanye nezinhlelo zamadolobha ahlakaniphile, sigxile ekusetshenzisweni kwamandla kanye nakwezingqalasizinda ezihlakaniphile kanye nokusungula izixazululo zamandla avuselelekayo, ukulawulwa kwegridi amandla aphansi, ukugcinwa kwamandla nokulawula okuhlakaniphile kwamanethiwekhi wokusabalalisa.
Yini ekwenze ukuthi ucabange ukusungula isikhungo sedolobha smart digital?
Umbono wethu weSmart City Digital Center ukusheshisa ukuthuthukiswa kwedolobha smart ngokubambisana nokukhulisa ithalente. Kuthuthukiswe yi-MindSphere, uhlelo lwe-IoT olususelwa efwini, isikhungo sakhiwe njengelebhu evulekile enika amandla i-R&D ezakhiweni, amandla nokuhamba. Ngokwenza ngcono ukuxhumana kwe-IoT, ihabhu yethu yedijithali ihlose ukusiza abathintekayo ekuboneni ubuthakathaka bedolobha lethu kanye nezinkampani ezisekelayo ukukhulisa amabhizinisi abo ngokudijithali.
Siyethemba ukuthi lesi sikhungo siqhakambisa ithalente lesikhathi esizayo eHong Kong ukuxhasa amandla okukhula wedolobha elihlakaniphile. Ngalesi sizathu, lesi sikhungo siqale i-Mindsphere Academy ukuhlinzeka ngoqeqesho futhi sisebenzisana noMkhandlu Wokuqeqesha Abasizi ukusiza ukusiza izidingo zabasebenzi futhi sikhuthaze ababambe iqhaza kulo mkhakha.
Yimiphi imisebenzi esemqoka yalesi sikhungo?
Isikhungo sethu se-Smart City Digital sihlose ukuhlanganisa ukudala imvelo entsha yedolobha ngokubambisana nabalingani bendawo njengabahlinzeki bengqalasizinda, izikhungo zemfundo, nokuqalisa. Lesi sikhungo sihlose ukusebenza njengesixhumi sokwabelana ngolwazi ngobuchwepheshe obuthuthukisiwe be-IoT, khuthaza imikhakha ukuthi ivule idatha yezinhlelo zokusebenza ezihlelekile zedolobha, ikhiqize imininingwane ngokubuka okuphelele kwengqalasizinda yedolobha, futhi ihlole ukusetshenziswa kwedolobha okuhle. Umgomo wokugcina ukwakha idolobha elinobuhlakani eHong Kong futhi lithuthukise amandla nokusebenza kwedolobha lethu.
Yisiphi isifunda ubona intuthuko enkulu ekushintsheni kwedijithali?
Sibona inqubekela phambili emkhakheni wezokwakha, owamandla kanye nowokuhamba osizakala kakhulu ngokufakwa kwedijithali.
Izakhiwo zingabasebenzisi abakhulu bamandla kuleli dolobha, zisebenzisa u-90% kagesi eHong Kong. Kukhona amandla amakhulu okuthuthukisa amandla esakhiwo, anciphise umthelela wawo emvelweni, futhi aphathe ngobuhlakani isikhala sendawo yangaphakathi ngobuchwepheshe obukhula ngamandla be-AI. Isibonelo, uhlelo lwethu lokuphatha i-AI Chiller luhlinzeka ngokuqapha isimo se-24x7 sesitshalo se-chiller, ngokushesha sinikeze izincomo eqenjini lezinhlaka zokwakha ukuze lenze imisebenzi yazo ngokuqhubekayo. Esinye isibonelo “yizakhiwo ezingakhuluma” ezixhumanisa ngaphandle kwamandla nohlelo lwamandla ukwenza uhlelo lwe-ecosystem oluphendula ngezidingo zezakhiwo nabantu abahlala kulo ngenkathi luqinisekisa ukuthi izinsiza zamandla zedolobha zibalulekile indlela ephumelelayo nenamandla.
Edolobheni elinabantu abaningi njengeHong Kong, kunethuba elikhulu lokukhulisa ubuchule bokuhamba obunamandla ukuze kunikezwe amandla okuhamba okuhamba ngezinyawo kwabahlali bakhona. Ukuqanjwa kabusha ku-V2X (imoto-ax) kuvumela ukuxhumana okuqhubekayo phakathi kwezimoto nezingqalasizinda ezisekela izinhlelo ezifana nezisombululo zokulawula eziqondayo ukuphatha izimo eziyinkimbinkimbi zezimoto emigwaqweni yedolobha. Obuchwepheshe obunjalo lapho busetshenziswa ngezinga buye bukhiye ukunika amandla ukusebenza okuphephile futhi okuthembekile kwezimoto ezizimele kulo lonke idolobha.
Sitshele ngokubambisana phakathi kweWindows Systems ne-Nokia: Ngabe lokhu kusebenzisana kusiza kanjani umkhakha wezingqalasizinda?
Abakwa-Nokia kanye ne-Bentley Systems banomlando wokunezela amaphothifoliyo abo ahlukene ngelayisense lobuchwepheshe komunye nomunye ukuhlinzeka ngezisombululo emkhakheni wezimboni zedijithali. Umfelandawonye uthuthuke phambili ngonyaka we-2016 ukufezekisa amathuba amasha okukhula embonini kanye nengqalasizinda ngokuhlanganiswa kwamamodeli wonjiniyela wedijithali ahambisana nezinhlelo zokutshala imali ngokuhlanganyela. Ukugxila kumawele ledijithali kanye ne-MindSphere elengiswayo, umfelandawonye usebenzisa amamodeli wonjiniyela wedijithali ekusebenzeni kokubuka nokusebenza kwempahla kwengqalasizinda exhunyiwe enika amandla izinhlelo zokusebenza ezithuthukile njengesixazululo se- "Simulation as Service" kuwo wonke umjikelezo wempilo yempahla. Lokhu kunciphisa izindleko zokujikeleza impilo yonke kusukela ukwenziwa kahle ekwakhiweni, ekusetshenzisweni, nasekusebenzeni kungatholwa ngokwenziwa ngamawele wedijithali ngokuqaliswa kokuqala kuphela lapho ihlangabezana nakho konke okulindelwe nokucacisiwe. Imvelo yedatha exhunyiwe yedatha yalokhu inikezela emisha yokuphetha yedatha yedijithali eyakha amawele enqubo futhi nempahla yedijithali ephelele. Ngokubambisana kwakamuva, womabili la maqembu aqalise i-Plant View ukuze Xhuma, Contextualize, Qinisekisa, futhi ubone ngeso lengqondo idatha yedatha ukudala amawele edijithali abasebenzisi ukuze bathole imininingwane entsha. EHong Kong, isikhungo sethu sedolobha esedijithali esihamba phambili sidingida izihloko ezifanayo ne-Bentley ukwenza inzuzo kumakhasimende futhi kusheshiswe izinguquko zedolobha elihlakaniphile.
Ngabe uqonde ini ngeDolobha Solutions?
ICity Solutions City (i-CCS) exhumanisa i-Inthanethi Yezinto, i-computing yamafu, kanye nobuchwepheshe bokuxhumana ukusekela ukuphathwa kwedolobha okuhle nokunikeza amandla omphakathi. Ngemininingwane eqoqwe izinzwa namadivaysi ahlakaniphile ahlanganiswe futhi anikwe amandla yi-MindSphere, izixazululo zedolobha elixhunyiwe ziqondisa ukusebenza kwedolobha ngokunika amandla ukuxhumana kwe-IoT kanye nokuqoqwa kwedatha yedolobha nokuhlaziywa. Ukwanda kwezinzwa ze-IoT edolobheni kungavumela ukuqoqwa kwemininingwane yemvelo, kufaka phakathi ukukhanya kwemvelo, ukuhamba komgwaqo, idatha yezemvelo kufaka phakathi izinga lokushisa, umswakama, ingcindezi, umsindo, izinga lokudlidliza nezinhlayiya ezimisiwe. Imininingwane eqoqiwe ingahlaziywa ngobuciko bokufakelwa ukunikeza imininingwane noma ukubikezela ikusasa lezinselelo ezahlukahlukene zasemadolobheni. Lokhu kungakhiqiza imibono yokuguqulwa kwabahleli bamadolobha ukubhekana nezinselelo zasemadolobheni ezinjengokuphepha komphakathi, ukuphathwa kwempahla, ukusebenza kahle kwamandla, kanye nokuxinana kwethrafikhi.
Ngabe u-Nokia usiza kanjani ukwakha umphakathi wabathuthukisi bedolobha abahle ngokugxila kwezemfundo?
I-Nokia Smart City Developer Community (SSCDC) yasungulwa ngoJanuwari 24, 2019 njengezokwandiswa kwehabhu lethu ledolobha elihlakaniphile ledijithali ukuze lisebenzise futhi linwebise amandla e-Mindsphere. I-SSCDC ifaka abalingani bebhizinisi, ochwepheshe kwezobuchwepheshe, ama-SME, nokuqalisa ekuthuthukisweni kwedolobha elihlakaniphile ngokusebenzisa ukwabiwa kolwazi, imibono ngokubambisana, ukuxhumana kwenethiwekhi namathuba okubambisana. Inezinhloso ezi-4 ezibalulekile:
Ezemfundo: Inikeza ukuqeqeshwa okuthuthukile kwe-IoT, ukusebenzela ukuhlangana kanye nama-seminar agxile ezimakethe ukuxhasa amathalente endawo, onjiniyela, ezemfundo ne-CXO ekwakheni izixazululo zedijithali ezinobungozi.
Amanethiwekhi: Yakha amanethiwekhi ochwepheshe ngokwakha amaqembu akhethekile entshisakalo ngama-Startups, ama-SME nezinsizakusebenza ezinamathuba wokuxhumana ezingqungquthela ezahlukahlukene.
Ukudalwa Okubumbene: I-MindSphere esezingeni eliphezulu njengengxenyekazi yoku-inthanethi yokusebenzisana nabantu abanomqondo ofanayo ukuguqula imiqondo yezimboni ibe yizicelo zomhlaba wangempela.
Ubambiswano: amathuba okudlulisela ukuqala okungaba khona nama-SME kunethiwekhi yomhlaba yokuqalisa nokuxhuma kwezimboni ukuhlomisa amalungu ngolwazi kanye nokutshalwa kwezimali ukukhulisa isisombululo nge-MindSphere.
Umphakathi ubuye ukhuthaze uhlelo oluhlanganisiwe lwezinto eziphilayo ukuze izinkampani zikwazi ukumelana nokuphazamiseka kwezobuchwepheshe okulethwe yi-IoT, zikhulise amabhizinisi azo, futhi zibhekane nezinselelo ezicindezelayo zamadolobha asafufusa. Esikhathini esingaphansi konyaka, i-SSCDC inamalungu angaphezu kwe-120 anemicimbi yomphakathi eyi-13 kusuka ezifundweni zezandla ze-IoT kuya kwi-MindSphere Solution Day, kuvulwa amandla we-IoT futhi kukhiqizwe izingxoxo ngamathuba wokudala wokubambisana.
Noma yimuphi umyalezo ofuna ukuwunika imboni yezokwakha / abasebenzisi.
Ama-Digitization aletha ushintsho oluphazamisayo kwizimboni eziningi ezingaba yingozi uma zinganakwa, kodwa ithuba uma lamukelwe. Embonini yezokwakha ephonswa inselelo yokwehla komkhiqizo nezindleko ezikhulayo, wonke umjikelezo wempilo wephrojekthi ungazuza ngokwenza idijithali.
Isibonelo, amamodeli wolwazi lokwakha angalingisa isakhiwo cishe bese kuba ngokomzimba, futhi ukwakhiwa kuqala kuphela ngemuva kokuthi ukubonwa kuhlangane konke okulindelwe nokucacisiwe. Lokhu kungenziwa kuthuthukiswe ne-MindSphere, enika amandla ukuqoqwa kwedatha yesikhathi sangempela, ukuhlanganiswa, kanye nokuhlaziywa kulo lonke umjikelezo wokwakha, ukuvula amathuba amaningi agxilwe kumawele ledijithali yephrojekthi. Lokhu kubuye kunikeze amandla ukuhlanganiswa kobuchwepheshe obunjengokukhiqiza okungeziwe okungasiza ekwakhiweni kwezakhi zokwakha kusuka kumawele ledijithali ukusheshisa ukwakhiwa kweModular Integrated Building (MiC) ngenqubo yokwakha esebenza kahle.
Ukuguqula inqubo yokubhekwa kwezokwakha kanye nesitifiketi, njengamanje esekho emaphepheni, ukusungulwa kobuchwepheshe be-blockchain kungavumela ukuphathwa kanye nokuqashwa kwamaphrojekthi edijithali, ukuqinisekisa ukucaca, ukuthembeka kwamarekhodi, nokwenza ngcono ukusebenza kahle. Ukudweba kukhombisa amathuba afinyelela kude futhi kuguqula indlela esakha, sisebenzisane ngayo, futhi sisebenze ngayo, sithuthukisa kakhulu umkhiqizo sokwakha futhi sinciphise izindleko zephrojekthi, ngenkathi sikhiqiza izinzuzo ezilinganisiwe kulo lonke umjikelezo wempilo wesakhiwo .
Ngabe u-Nokia usebenzisana nezinye izinkampani ukwakha ubuchwepheshe obusezingeni eliphezulu elenza ukudalwa / ukugcinwa kwamadolobha ahlakaniphile?
IMotor ihlala ivulekile ukusebenza nezinye izinkampani futhi ayikhawulelwe ezinkampanini.
U-Nokia usayine izinkumbulo zokuqonda futhi wenza imifelandawonye eminingi eHong Kong ukusheshisa ukuthuthukiswa kwedolobha elihlakaniphile, isibonelo:
I-Smart City Consortium (SCC) - Ixhuma i-MindSphere emphakathini wedolobha laseHong Kong ukukhombisa ukuthi i-MindSphere ingasebenza kanjani njengeplatifomu yedolobha lase-IoT.
I-Hong Kong Science and Technology Parks Corporation (HKSTP): Ukubambisana okusheshayo ekwakheni izixazululo zedolobha elihlakaniphile nge-IoT kanye nokuhlaziywa kwedatha
I-CLP: Sungula amaphrojekthi wokushayela wegridi yamandla, idolobha elihlakaniphile, amandla kagesi kanye ne-cybersecurity.
MTR: Dala izixazululo zedijithali zokwandisa ukusebenza kwezitimela ngokusebenzisa ama-analytics
I-VTC: Hlakulela amathalente esizukulwane esilandelayo ukuze uqinisekise ukusimama kohlelo lokuphilisana kwendalo futhi ulethe imibono emisha yokwenza izinto ezizayo.
NgoJanuwari walo nyaka, abakwaNokia baphinde babamba iqhaza kuhlelo lweGreaterBayX Scalerater, okuyisinyathelo esihlanganyelwe nabaqalayo abahamba phambili kanye nezinkampani ezinjengeGreater Bay Ventures, HSBC neMicrosoft ukusiza abalingisi bakwazi ukubona umbono wabo wedolobha futhi basebenzise amathuba akhulayo e indawo enkulu ye-bay ngolwazi lwethu lwesizinda.
Thumela Previous«Langaphambilini I-Digital Twin - Ifilosofi yenguquko entsha yedijithali
Post Next IGeofumadas - ekuhambeni kulo mzuzu wedijithaliOkulandelayo »